Igumbi lamaphupho - I-Airbnb
Ifulethi elihle futhi elithokomele elingu-52 sqm, elisendaweni epulazini lethu, lisesifundeni sasemaphandleni sase-Tettnang endaweni ye-idyllic ezungezwe izihlahla zezithelo futhi cishe amakhilomitha angu-8 ukusuka e-Lake Constance.
Ifulethi lihlanganisa ubuhle bokusetshenziswa kwasemaphandleni kanye nefenisha yesimanje. Indawo yomlilo inikeza isimo esikhethekile, ikakhulukazi ngenkathi ebandayo. Egcekeni eliseduze ungahlala ngaphandle noma igrili.
Ukusuka lapha yimizuzu engu-10 yokuhamba ngezinyawo ukuya e-Tettnang nemizuzu engu-10 yokuhamba ngemoto ukuya e-Lake Constance.
Ifulethi linomoya ofudumele futhi omnandi ngenxa yokusetshenziswa kwezinto zemvelo, indawo yaphansi yokhuni yemvelo nophahla oludala lokhuni. Ehlobo, izindonga zendlu eziwugqinsi ziqinisekisa isimo sezulu esihle sangaphakathi. Ifulethi lisesitezi esiphansi futhi liyakwazi ukusetshenziswa yisihlalo sabakhubazekile.
Indawo yomlilo enefasitela elikhulu isendaweni yokuphumula futhi yakha isimo esihle kakhulu nesisekhaya, ikakhulukazi ekwindla nasebusika. Njengoba ifulethi lingekho ngokuqondile e-Lake Constance, kodwa ngebhayisikili noma ngemoto efinyeleleka kalula, ukude nesiphithiphithi sezivakashi futhi ujabulela ukuthula nokuzola okumnandi.
4.99 · 139 okushiwo abanye
Imindeni enezingane ihlala endaweni. Ngenxa yendawo yasemaphandleni, ithule lapha, kodwa awukude nedolobha ne-Lake Constance.